News Collection: घामबाट जोगिऔँ
काठमाडौ, जेष्ठ २० - यसपालिको गर्मीले काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दालाई समेत मधेसको भावर बिर्साउँदै छ । बढ्दो गर्मीमा अरू हेरविचार त छँदै छ, सबैभन्दा प्रमुख हुन जान्छ शरीरको स्याहार, त्यसमाथि पनि छालाको । सूर्यको चर्को किरणबाट छाला जोगाउन विशेष स्याहार नगरे अनेक किसिमका दाग, पिग्मेन्टेसन, डाबरले दुःख दिन्छन् । छाला डढ्ने, चाउरी पर्ने हुन सक्छ ।
यस्तो चुनौतीको सामना गर्ने सरल माध्यम हो छाता । यस बाहेक सनस्त्रिmन वा सनब्लक क्रिमको समुचित प्रयोग गरेर पनि छालालाई घामको तात्कालिक र दीर्घकालिक असरबाट धेरै मात्रामा जोगाउन सकिन्छ ।
यो त भयो गर्मी याममा बाहिरफेर निस्कनुपर्ने बाध्यता भएकाहरूको कुरा । तर, घाममा हिँड्नुपर्ने काम नपर्नेहरू वा घरैभित्र बसिरहनेहरूलाई पनि घामले असर नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूमा समेत छाला डढ्ने, बिमिरा निस्कने जस्ता समस्या देखिन्छन् ।
हामीमध्ये अधिकांशलाई के लाग्छ भने, घरभित्र बस्दा सनस्त्रिmन आवश्यक हुन्न । धुलिखेल अस्पतालका छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णका अनुसार, सूर्यको किरणको प्रभाव घरभित्र समेत पर्छ, त्यसैले घरमा बस्दा समेत त्यस्तो क्रिम हात, पाखुरा, गर्दन वा शरीरको खुला भागमा दल्न बिर्सनुहुन्न । तर घरै बस्दा चाहिँ एसपीएफ १५ को लोसन उपयोग गर्दा पुग्छ ।
अधिकांश व्यक्तिले छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाहमा होइन, अन्यत्रबाटै पाएका विभिन्न जानकारीका आधारमा सनस्त्रिmन क्रिम लगाउने गरेका छन् । 'त्यस्ता व्यक्तिले सनस्त्रिmनको प्रस्तावित मात्राको दाँजोमा ३० प्रतिशत मात्र प्रयोग गरेका हुन्छन्,' कर्ण भन्छन् ।
घामले शरीरको छाला डढाउँदैन मात्रै, त्यस्तो परावैजनी किरण (अल्ट्राभ्वाइलेट रे) ले समय अगावै बूढो समेत बनाउँछ । परावैजनी किरण विकिरणको एउटा अदृश्य रूप हो । यसले छालाका कोषमा समेत नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ ।
'परावैजनी किरणले गर्मीयाममा मात्र नभई कुनै पनि मौसम र कुनै पनि तापक्रममा छालामा क्षति पुर्‍याउन सक्छ,' कर्ण उल्लेख गर्छन्, 'यो चाउरी, आँखाको समस्या, छालामा दाग र छालाको क्यान्सर समेतको कारण हुन सक्छ ।' तलाउ छेउछाउको बालुवा, पानी तथा कंक्रिटले सूर्यको अधिकतम हानिकारक किरणलाई छाया भएको ठाउँमा परावर्तित गर्छ । यस्तै बस, कार लगायतको सिसाबाट आउने सूर्य किरणले समेत छालामा क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।
कस्तो सनस्त्रिmन ?
छाला डढाइबारे अमेरिकास्थित फुड एन्ड ड्र्रग एडमनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले विकास गरेको १ नम्बरदेखि ६ नम्बरसम्मको स्केल अनुसार, अधिकांश नेपालीको छाला चौथो स्केलमा पर्छ । डा. कर्ण चौथो समूहको छालामा एसपीएफ २० वा माथिको सनस्त्रिmन प्रस्ताव गर्छन् । सनस्त्रिmन एसपीएफ २ देखि ६० सम्मको पाइन्छ ।
सनस्त्रिmन लगाउने तरिका शरीरको खुला भागमा उपयुक्त सनस्त्रिmन पर्याप्त लगाउनुपर्छ । घाममा निस्कनुभन्दा १५ मिनेट पहिले सनस्त्रिmन लगाएको हुनुपर्छ । टाउको खुइलिँदै गएकाहरूले टोपी नलगाउने भए त्यहाँ पनि क्रिम लगाउन भुल्नुहुन्न ।
सनस्त्रिmनलाई खेलाँची नसम्झौँ सनस्त्रिmन लगाउने भन्दैमा जुन पायो त्यही कम्पनीको किन्ने भूल कदापि गर्नुहुन्न । त्यसको उत्पाद लेवललाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । सनस्त्रिmनको सन-प्रोटेक्सन फयाक्टर -एसपीएफ) १५ वा योभन्दा बढी हुनुपर्छ । एसपीएफले हाम्रो छालालाई चर्को घामबाट कतिसम्म रक्षा गर्न सक्छ भन्ने संकेत गर्छ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने, १५ एसपीएफको सनस्त्रिmनले छालालाई सनस्त्रिmन नलगाउँदाको तुलनामा १५ गुणा बढी सुरक्षा प्रदान गर्छ ।